> Resource> Video> Olee otú Mee a Video Nta
The nnukwu size nke videos nwere ike weghara ukwuu ohere nke na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ wdg Ọzọkwa, a nnukwu video faịlụ bụ na-emekarị oke buru ibu dabara na a ọkọlọtọ DVD, oke buru ibu bulite ka saịtị dị ka YouTube na myspace, kwa nnukwu kpaliri , were gabazie. Na okwu, a video na bụ oke buru ibu nwere ike ime ka ị nza nke nsogbu. Na nke a, nwere ike ị chọrọ ka a video nta.
Iji mee ka a video faịlụ nta, ẹsụhọde video mkpebi bụ ndị kasị dị irè na ụzọ dị mfe. Ma ọ bụ i nwere ike tọghata gị na nnukwu video ndị ọzọ format nke nwere nta size dị ka FLV. Ọzọ irè ụzọ bụ ebipụ achọghị obere vidiyo nke nnukwu video, ma ọ bụrụ na-amasị gị.
Ị nwere ike ime ihe nile nke ihe ndị a na onye nwere ọgụgụ isi video edezi tool- Wondershare Filmora (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)). Ọ na-enyere gị aka ime video size nta site na mbenata video mkpebi, bit ọnụego, etiti ọnụego, nakwa dị ka converting ndị ọzọ formats dị ka FLV ma ọ bụ igbupụ ụfọdụ na-enweghị isi ma ọ bụrụ na Obere vidiyo-amasị gị. Ọtụtụ ihe, a na ngwa nwere ikike na-eme ka videos nta ma na-dịtụ elu visual na auditory mma.
1 Ibu Ibu a video ka onye ọrụ album
Ibu Ibu onye gị chọrọ videos ka a na ngwa, e nwere abụọ ụzọ dị iche iche na-eme ya. Na otu onye bụ pịa "Import" bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe mbubata gị Obodo video faịlụ. Ndị ọzọ bụ ka kpọmkwem ịdọrọ video site na kọmputa a ngwa si album. Mgbe video faịlụ a depụtara na a ngwa si album,-anọgide na-ịdọrọ ya si album ka usoro iheomume na ala.
N'ezie, ihe ndị kasị kpọmkwem ụzọ bụ bee video ogologo. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ebipụ ụfọdụ na-enweghị isi mkpachị si video faịlụ, dị nnọọ eso nzọụkwụ 2 ime ya. Ma, ozugbo Ikwu kwụpụ 3.
2 (Nhọrọ) ebipụ ụfọdụ na-enweghị isi mkpachị
Pịa video na usoro iheomume, ịdọrọ n'elu nke red Time egosi ọ bụla ọnọdụ nke video, pịa "scissor" bọtịnụ bee ya. Tinyegharịa ime bee video n'ime multiple Obere vidiyo. Mgbe ahụ nri pịa gị achọghị obere vidiyo na họrọ "Hichapụ" nhọrọ.
3 Mee ka a video nta
See "Mepụta" button n'akụkụ aka nri na-gbapụta a ngwa si mmepụta window. Mgbe ahụ, pịa Format taabụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata video ka a ukwuu abịakọrọ video usoro dị FLV wdg, ị nwere ike họrọ FLV. Ma ọ bụ nanị họrọ mbụ video format dị ka mmepụta usoro. Ọzọ, ị nwere ike ime ka videos nta site ẹsụhọde ya video mkpebi, etiti Rate ma ọ bụ bit ọnụego. See triangle button, a dịgasị iche iche nke video nhọrọ ga-apụta, dị ka mkpebi, etiti ọnụego, bit ọnụego, encoder, wdg Nịm video mkpebi na-a nta uru. Ọ bụghị obere ezu? Ok, ị nwekwara ike belata ya etiti ọnụego na bit ọnụego mee ka video size nta.